Somaliland: Murrashax Muuse Biixi iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Si Diirran Loogu Soo Dhaweeyey Deegaannada Dharkeyn-geenyo iyo Dabataag - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Murrashax Muuse Biixi iyo Wefti uu Hoggaaminayo oo Si Diirran Loogu...
Wefti ballaadhan oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, ahna murrashaxa madaxweyne Md. Muuse Biixi Cabdi oo ay xubno ka yihiin wasiirro, xildhibaanno, siyaasiyiin, salaadiin, cuqaal iyo dhallinyaro, ayaa maanta si ballaadhan loogu soo dhaweeyey deegaannada kala-baydh iyo Dabo-taag oo ku yaalla koonfurta gobolka Sool.
Murrashaxa iyo weftigiisa, ayaa waxa si kal iyo laab ah u qaabilay shacabweynaha deegaannadan, kuwaas oo iyaga oo lulaya caleemo qoyan iyo astaanta xisbiga KULMIYE waddooyinka magaalooyinkan kusoo dhaweeyey, isla markaana kusoo wareejiyey waddooyinka iyo suuqyada.
Waxgaradka, cuqaasha iyo siyaasiyiinta deegaanka oo kamid ahaa dadkii weftiga soo dhaweeyey, ayaa goob fagaare ah uga mahadnaqay murrashaxa iyo xisbiga KULMIYE, waxana ay codsadeen in kor loosii qaado waxqabadka xukuumaddu ka waddoo deegaannadaas.
Xubno siyaasiyiin ah oo xukuumadda iyo xisbigaba katirsan oo iyaguna shacabka goob fagaare ah kala hadlay, ayaa si weyn ugu mahadnaqay shacabka, waxana la dhagax dhigay goobo loogu talogalay in laga dhiso xarumo dawladda Hoose yeelan doonto iyo weliba xarun Boolis oo ay yeelan doonto degmada Dharkeyn-geenyo, iyada oo sidoo kalena baabuur lagu wareejiyey.
Murrashaxa xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo dadweynaha deegaannadan la hadlay, ayaa mahadnaq iyo bogaadin kadib si weyn ugu adkeeyey dadweynaha deegaannadan inay xil iska saaraan qaadashada kaadhadhka codbixinta oo maalinta berri ha halkaas ka bilaabmi doona.
Guddoomiyaha golaha wakiillada Md. Baashe Maxamed Faarax, ayaa isaguna shacabka deegaannadaas ku wacyigeliyey inay si habsami leh u qaataan kaadhadhka cod-bixiyayaasha, waxana uu weftiga gudaha magaalada Dharkgeyn-geenyo ugu sameeyey quraac-sharageed si weyn loogu kaftamay.